Intaba Ephezulu Escape - Izulu Eliluhlaza - I-Airbnb
Intaba Ephezulu Escape - Izulu Eliluhlaza
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Diane
Xhumana nabangane nomndeni ngenkathi uphuza ikhofi kuvulandi futhi ubukele izinyamazane, amaturkey zasendle noma izinyoni ezihumming. Yabelana ngezinye zezithelo zengadi yethu futhi upheke ekhishini elihlome ngokuphelele noma u-grill kuvulandi ngemva kokuqwala izintaba, ukuvakasha noma ukuzihlalela nje ku-hammock. Dlala ihokhi yomoya ku-attic noma imidlalo noma wenze iphazili. Kamuva, fudumala ngesitofu sezinkuni, ngengilazi yewayini noma incwadi, thola ukupholisa kubhavu oshisayo futhi ubone izinkanyezi noma u-roast s'mores emgodini womlilo.
Lilungiswe ngokugcwele futhi lenziwe laba simanje ikhaya lamakoloni omlando wamaDashi elitholakala eminyango engu-2 ukusuka e-Stone Church etholakala kumahektha angu-2+ otshani anezingadi zezinhlobo zezilwane, indawo yokucima umlilo nobhavu oshisayo ohlalisa abantu abangu-6. Eduze kwezindlela zewayini, izindlela zokuhamba izintaba kanye ne-Sam's Point Preserve. Imizuzu engama-45 ukuya eNew Paltz, imizuzu eyi-10 ukuya e-Ellenville noma ePine Bush uyothenga noma udle.
I-TV engu- 42" ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, Hulu, I-Netflix
4.87 · 76 okushiwo abanye
Kunezintaba eziningi ezinhle kanye nezindlela endaweni. Siphezu kwentaba efanayo ne-Sam's Point Preserve (amamayela angu-2 ukusuka endlini), kanye ne-Bear Cliff zombili ezinenkokhiso yokusetshenziswa. Imininingwane inikezwa endlini noma ingathunyelwa nge-imeyili.
Kukhona futhi umzila wewayini, i-antiquing neminye imikhosi yasendaweni. Sihlinzeka ngencwadi enenqwaba yale misebenzi esohlwini kanye nezindawo zokudlela ezinconyiwe nezinketho zokuthenga ukudla.
I am an avid gardener, hiker and sometimes marathon runner. We raised our kids in the weekend house that we have customized to our needs and now we would like to share some of this with you.
Sicela usinikeze i-imeyili ngaphambi kokufika kwakho ukuze sikuthumelele iphakethe lolwazi.
Ngivame ukutholakala nge-elekthronikhi futhi kukhona umuntu osebenza ngesandla ucingo.
Njengoba iwasha esebenza kahle ihamba kancane, sicela ukuthi izivakashi ziwashe noma imaphi amathawula asetshenzisiwe. Ukusebenzisa imishini kulula njengoba upakisha.
Silindele ukuthi yonke into ishiywe cishe njengoba kutholakala lapho ufika, udoti nezinto zomuntu siqu ziyakhishwa, izitsha zihlanzekile noma zishiywe kumshini wokuwasha izitsha/umsele wezitsha futhi amafasitela neminyango ivaliwe.
Ngivame ukutholakala nge-elekthronikhi futhi kukhona umuntu osebenza ngesandl…